Fampivoarana ny any atsimo :: Hotohanana ara-bola ireo tantsaha - ewa.mg
News - Fampivoarana ny any atsimo :: Hotohanana ara-bola ireo tantsaha
Hahazo fampindramam-bola ho an’ny asa famokarana ireo tantsaha any amin’ny faritra Atsimon’i Madagasikara, vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fandaharanasa maneran-tany misahana ny sakafo (PAM) sy ny banky BOA, izay hamatsy vola, amin’ny alalan’ny fandaharanasa Fihariana. Ireo sehatra asa tena mampidi-bola ho an’ny tantsaha na fambolena na fiompiana na asa tanana no hahazo tombony amin’izao hetsika izao. Tantsaha roanjato avy any Anosy sy Androy, izay lasibatra amin’ny haintany sy ny kere, no hanombohana azy. “Mila fanampiana ireo olona ireo. Efa mitondra fampiofanana ihany ny PAM saingy mila vola ihany koa. Ny famokarana rehetra hataon’ireo tantsaha no tohanana ara-bola. Mitady ny lalam-barotra ho azy ireo ihany koa izahay”, hoy Zafindravaka Valérie, sekretera mpanatanteraky ny fandaharanasa Fihariana.
Manomboka amin’ny 5 hatramin’ny 9% kosa ny zana-bola, alaina amin’izy ireo isan-taona, hoy Rafenomanjato Ravaka, avy ao amin’ ny BOA.Hanomboka amin’ity herinandro ity no hisitraka ny fampindramam-bola ireo tantsaha.
L’article Fampivoarana ny any atsimo :: Hotohanana ara-bola ireo tantsaha est apparu en premier sur AoRaha.
Fahaverezana mampiahiahy :: Karohina ny vehivavy iray sy ny zanany menavava
Karohina, efa ho dimy andro hatramin’ny omaly, ny vehivavy iray sy ny zanany menavava, taorian’ny nialan’ izy mianaka ny tranony, teny Andoharanofotsy, tamin’ny marainan’ny alarobia 15 jolay lasa teo. Velon’ahiahy tanteraka ny havan’izy ireo akaiky, indrindra rehefa hita teny Ambohimanala Bevalala ny lamba sy ny akanjo sasany nanaovan’izy mianaka, afak’ omaly maraina. Enina amby roapolo taona io renim-pianakaviana tsy hita popoka, hatramin’ny omaly, io. Manohy ny fitadiavana azy ireo ny fianakaviany. “Tsy nisy nahita ny nialan’ izy mianaka tao an-trano, tamin’ny alarobia tokony ho tamin’ny 4 ora maraina. Tsy nitondra entana na zavatra hafa izy ireo. Nanomboka teo ny fikarohana nataonay, niaraka tamin’ny fampandrenesana ny mpitandro filaminana. Niantso anay ny lehiben’ny fokontany, omaly maraina, (Ndrl: sabotsy) fa misy lamba hita eny Bevalala. Bodofotsin’ilay zaza sy ny bankirarony ary lambany hafa no hita teny. Tonga aty Ankadivoribe izahay manao ny fikarohana”, hoy ny fitantaran’ny havan’ireto mpianaka very tamin’ny antso an-tariby, omaly. Tsy misy disadisa Folo andro talohan’io alarobia 15 jolay io no nahaterahan’ilay zaza. Nambaran’ ny fianakaviana hatrany fa nisy fahasarotana teo amin’ny fiterahana, ka tokony hanohy fitsaboana any an-trano ny renin’ilay zaza. Tavela tao antrano anefa ny fanafody tokony hohaniny. “Tonga nampilaza tety aminay ny havan’izy mianaka ireo saingy tsy mbola niverina na nanome vaovao hafa, hatramin’izao. Toa hoe tsy nisy olana ilay renim-pianakaviana tsy hita fa tokony hanohy fitsaboana taorian’ny niterahany. Arakaraka ny vaovao voaray kosa ny fepetra sy ny fanadihadiana ataonay manoloana ny tsy fahitana olona tahaka izao”, hoy ny hany fanampim-panazavan’ny zandary eny Andoharanofotsy, izay mandray an-tanana an’ity raharaha ity. Mangataka fiaraha-miasa amin’ireo rehetra mahita azy mianaka voalaza ireo ny fianakaviana, amin’ny alalan’ ny fanomezam-baovao amin’ ny laharana finday 0341118859 na ny 0339231351. L’article Fahaverezana mampiahiahy :: Karohina ny vehivavy iray sy ny zanany menavava est apparu en premier sur AoRaha.
Politika… mila fanovana
Manakorontana ny hoe fanoherana amin’izao? Manakoro tantana izany, na manao izay hampirodana ny fitantanana na ny fitondrana. Hatramin’izao, tsy hita loatra izay hoe fiovana sy fanovana amin’ny fomba fanaovana politika.Misy amin’ireo mpanohitra no tsy mahay afa-tsy ny manakorontana izay fitondrana mijoro. Izay hidirana amin’ny hoe fiaraha-mitantana amina karazana tetezamita izany. Tsy sahy miatrika fifidianana ny ankamaroany amin’izany?Izay no mahatonga ny fanoherana dodoria be amin’ny fiandrasana kendry tohina, fitsikerana, famendrofendroana, fanakorontanana, fandravana efa, fandrodanana. Toerana no tetehina fa tsy izay fampandrosoana ny firenena velively?Tsy mba misy hevitra tsara sy mampandroso lavitra no ho izay ampiharin’ny fitondrana misy? Amin’izay tena soa iombonana amin’ny fiainam-pirenena sy fiainam-bahoaka izany. Sao manome tombondahiny ny mpitondra ve?Tsy misaina sy mitetika ny handimby mpitondra na hitondra fanjakana izany. Amin’ny alalan’izay mba hevitra sy fandaharanasa mazava tsara lavitra, maharesy lahatra, mampitelin-drora ny vahoaka hifidy ny tena any aoriana…Izay koa no saika tsy mampisy firy izay tena fifandimbiasam-pahefana mazava sy milamina. Korontan-dava no kotrehin’ny sasany hahazoana fahefam-panjakana fa tsy fifidianana. Fanakorontanana tsotra izao ny hoe fanoherana?Tsy mahagaga raha tsy mety mampiombona amina fifanatonana hisian’ny filaminana eo amin’ny mpitondra sy ny mpanohitra ho amin’ny fifandimbiasan-toerana ny hoe politika, fa saika adilahy lava, fifamaliana faty, fifamotehana…Rahoviana vao tsy manakorontana na manapotika ny hafa intsony ny hoe fanoherana amin’ny fitsikerana, na hoe mahery vaika aza, ohatra. Mba ho amin’izay tena mahasoa ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka. Mila fanovana…Miomana mandrakariva amin’ny fiatrehana fifidianana ho avy amina hevitra sy fandaharanasa mandresy lahatra vahoaka dieny tsy mbola eo amin’ny fitondrana izany fa tsy manakorontana lava amin’izay mitranga sy atao rehetra. Mba misy?Rafaly Nd.L’article Politika… mila fanovana a été récupéré chez Newsmada.